China M1013 pvc ruoko magurovhandi emhando yepamusoro pvc magirovhosi akagurika magokisi gumi mabhokisi pvc kuchengetedza magurovhinzi Chigadzirwa uye Vanotengesa | Xinyuanjiaye
M1013 pvc ruoko ruoko rwakakura ...
Yakakwirira Mhando Yakawanda Inoshandisa ...
Vagadziri Vanogadzira ...
M1013 pvc ruoko magurovhandi emhando yepamusoro pvc magirovhosi akaisa magokisi gumi mabhokisi pvc kuchengetedza magurovhosi
Yepamusoro giredhi rekurapa rekudzivirira risina hupfu uye hapana mapuroteni ehex. Iyo chaiyo vinyl magurovhosi kune vanhu vane hanya ne latex sensitivity. Smooth, yakasvinwa cuff. Yakasimba simba rakasimba. Powder yakasununguka kuti irege kukanganisa adhesive kana machira.
Powder yemahara Vinyl Magurovhosi inopa iyo 100% yekugadzira, ine imwe yakareruka uye yakapfava kupfuura yakajairika vinyl uye ine parctical dziviriro kune vazhinji applicationatgions. Kunzwa kwakanaka uye kuita. Iyo yakanaka yekudyara kune avo vanotambura ne Type I allergies.
1.Zvinhu zvacho ndeye pvc, iyo isiri yehupfu, isinganzwisisike uye eco-inoshamwaridzana, magurovhosi anowanzochengeteka kune vese vashandisi.
2.Easy kuchenesa, magurovhosi anogona kuraswa, iwe unongokanda mushure mekushandisa.
3.Compact dhizaini uye Hurefu, zviri nyore kutakura.
4.Gadzira maoko ako akachena
Mazano ekupfekedza mavheti edu ekudzivirira eVinyl PVC:
1. Ndokumbira utore zvigunwe zvemunwe kana uchipfeka. Fingernails yakareba kana yakanyanya kupinza inogona kukuvadza magurovhosi zviri nyore.
2. Ndokumbirawo kushandisa mapuru eminwe yako kuti upfeke, kudzivirira kuti glove iwire.
3. Ndokumbirawo utarise magurovhosi kubva pachiwoko chako kuenda kumunwe kana uchibvisa magurovhosi.
Kugadzira maitiro e latex magurovhosi: Latex magurovhinzi akagadzirwa emhando yepamusoro anogadzira / echisikirwo marex mareti uye zvimwe zvakanaka mareseti ane simba rinonetesa uye elongation; yakasarudzika post-kurapwa maitiro, hapana ganda kutsamwiswa uye allergy; zvigadzirwa zvine chaiyo pamusoro kurapwa, zvakatsetseka zvemukati pasi uye curling zviri nyore kupfeka uye wakasununguka.
Zvakanakira zvemagurovhosi e latex: Magurovhosi eLatex akakomberedzwa nemaoko maviri, aine ruoko rwakakombama uye anti-skid dhizaini iri pamusoro; ivo vanopfeka-inodzivirira uye punaching kurwisa; zvinopesana neasidhi, alkali, mafuta, mafuta emafuta uye akasiyana sol sol, nezvimwe .; vane huwandu hwakawanda hwekupesana nemakemikari, yakanaka kuramba mafuta uye ari / akagadzikana / ruoko kuchengetedzwa
Kushandiswa kwemahara egreenx: Magurovhosi eLatex akakodzera imba, maindasitiri, runako, kutsvakwa kwesainzi, zviridzwa zvakajeka, kugadzirwa kwemotokari, kugadzirwa kwebhetiri, indasitiri yeFP, gungano remuchadenga, indasitiri yendege, kuchenesa uye kuchenesa.
Disposable inodzivirira masks: Masiki anodzivirira ekudzivirira anonyanya kugadzirwa nezvikamu zviviri zve2 ~ 3 zvemicheka isina kurukwa. Masiki anodzivirira anodzivirira anonyanya kushandiswa kuita guruva uye kusefa zvinhu zvegiriniti.
Anorasa masiki ekurapa. iyo inogona kuwana zvirinani kuchengetedzwa.
KN95 anodzivirira masks: KN95 maski inowanzo kuve yakagadzirwa 4 ~ 5 layita, kusanganisira isina-yakarukwa machira uye 1 ~ 2 meltblown machira. Izvo zvinyorwa zvevhu guruva zvinofanirwa kunge zvisiri kutsamwisa uye zvisina-allergenic kuganda, uye iyo yefaira yezvinhu haisi kukuvadza kumuviri wemunhu; iyo diameter diameter inofanirwa kunge isiri pasi pemashanu emakomboni uye guruva rekumanikidza guruva rinofanira kunge rakakura kupfuura 95%. Pakati pavo, kukosha kwe95% hakusi kukosha pakati, asi kukosha kwakaderera, saka avhareji kukosha yezvigadzirwa chaizvo inonyanya kuiswa pamusoro 99%.
FFP3 zvinobudirira kusefa 99%, FFP2 95%, uye FFP1 80% ~ 90%. Iyo dhayiri yezvinhu zveHazardous ndeye 60-400nm, iyo mask haigoni kupfuura masisitimu mahombe kuitira kuti inyatsogona kuvhara Iyo Inokuvadza Substance.
Yepfuura: Kofi mask
Inotevera: Anti Saliva Fog Kuchengetedza Magirazi Goggles Akajeka Ziso Inodzivirira Magogi eAnoshandisa Kurapa
SGS yakaratidza 75% doro isina mvura ruoko ruoko san ...
Anti Saliva Fog Kuchengetedza Magirazi Goggles Zvakajeka Ey ...
Yakakwirira Mhando Yakawanda Inoshandisa Vana 3 ply Vana & ...
zvemhando yepamusoro kuvhiya zvinorasa zvisiri-zvakarukwa majasi
Disposable Dustproof Dziviriro Dziviriro Kubata KN95 ...